Ungawana sei vhiza yeKenya?
Dai 2, 2022 Demi Kenya, visa
Shanyira eVisa kubva kuRepublic yeKenya. Nyika zhinji pasi rose dzinoda e-visa kuti dziuye kuKenya. Dzimwe nyika, kunyanya dziri kuEast neSouthern Africa, hadzidi visa. Iwe unoda e-visa usati wapinda muRepublic of
Nzira yekuenda kuDubai?
April 20, 2022 Demi Dubai, zvinofamba, visa
Kuti uende kuDubai, unogona kuwana basa muUAE wobva wawana vhiza rekushanda. Kana iwe uine nhengo yemhuri muDubai, vanogona kukutsigira vhiza yemhuri. Kana ukaronga kudzidza mukati
Nzira yekuwana sei vhiza yeKenya yevaIndia?
April 18, 2022 Shubham Sharma MaIndia, Kenya, visa
Kenya inyika yeAfrica inozivikanwa nemapaki ayo e safari, asi hurumende ine zvakawanda zvekupa, senge matombo emakorari nemabhishi. Iyo inozivikanwa zvakare seRepublic of Kenya, Kenya inonzi zita reMount Kenya, Kenya yepamusoro.
Afghanistan visa kune maIndia
April 18, 2022 Demi Afuganisitani, MaIndia, visa
Zvizvarwa zveIndia zvinofanirwa visa kuenda kuAfghanistan sevashanyi. Nyika yakavhurika kufamba neECVID yekufambisa zano. Netemu yemazuva makumi matatu, kugara kwacho kunowanzo kuve kupfupi, uye vhiza inopera mumazuva makumi mapfumbamwe. Rini